Home » Creative Writing » လွန်ကဲသော စိုးရိမ်မှုသို့ တို့ထိမိခြင်း – Scratching on the surface of OCD
KZ's Diary OCD
ရှင်းချင်ရင်လည်း ရှင်းလင်းနေပြီး ရှုပ်နေရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ အမျိုးး..
ဘာ မဆို Easy-Going တို့၊ Carrying-On တို့ နဲ့ ဖြစ်သလိုပဲ အလုပ်ပြီး ရင် ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့ ခင်ဇော် နဲ့ တစ်ဂျိန်းဂျိန်းး သတ်နေရတယ်။
တည့်တဲ့ အချိန် ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့် ဖြစ်သလို ဖြိုသလစ် လုပ်တာတွေ အတွက် တောင်းပန်ရသလို
Praying excessively or engaging in rituals triggered by religious fear (ဒီ အပိုင်းက သဂျီးပြန်လိမ့်မယ်)
Accumulating “junk” such as old newspapers or empty food containers (အသုံးမဝင်တဲ့ အရာတွေကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းတတ်တာမျိုးတွေ)
(အပျော် စစ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ အဟိ .. YES (or) NO ရလာဒ်ပြောသွားပါ။ အဖြေပြန်ပေးပါ့မယ်)
Have you been bothered by unpleasant thoughts or images that repeatedly enter your mind, such as…
Have you worriedalot about terrible things happening, such as…
Have you felt driven to perform certain acts over and over again, such as…
Excessive or ritualized washing, cleaning, or grooming?
အချိန်မှန် မဂလုရရင် တစ်နေ့တာ အတွက်
“ဒီအချိန်ရောက်လာရင် ကွယ် ကျော့် စိတ်တွေဖောက်ဖောက်လာတယ်” လို့ ဆိုတတ်တဲ့ သမဂ္ဂ အသင်း အဖွဲ့ ထဲ ပါတယ်။ :-)))
နာ ဘာမှ လုပ်ဝူး။ သရဲ၊ သရဲ။
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) Screening Quiz မှာ အကြမ်းအားဖြင့် အကုန် နိုး… ချည်း..။
(5) Fire, burglary, or flooding the house?
လူ ကတော့ အနား မှာမရှိလေ ကောင်းလေ။ No
(17) Unnecessary re-reading or re-writing; re-opening envelopes before they are mailed?
(20) Needing to “confess” or repeatedly asking for reassurance that you said or did something correctly?
နောက် တစ် ခု ထပ်ဖြေရအူးမယ် အရီး
ဒါလေး ပါ ဖြေပေးးးပါ အရီးး
အဲဒါတွေ ကတော့ အတော်လေး ဒီဂရီ နဲပါတယ်။ တစ်ချို့ ဆို None လို့ တောင် ဖြေလို့ ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဇီကလေး ရဲ့။
အရီး ရဲ့ လက္ခဏာ က အရေးအကြောင်း မျိုးစုံ နဲ့ သူများ တွေထက် ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ လို့ ပြောရင် ရွာ့ကဝိန်များ သိကြလိမ့်မည်။
(လူတိုင်းမှာ ရှိနေကျ စိတ်၊ အတွေး၊ အပြုအမူ ဆိုပေမဲ့လည်း တရားလွန်ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ OCD ထဲ ပါသွားပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဒါမျိုး အတွေးအပြုအမူလောက်ရှိရုံနဲ့ OCD ထဲ မပါပေမဲ့ ဒီ အထဲက အကြောင်းအရာ တူ တစ်ခုခု အတွက်ကြောင့် …
အနော့်အစား တစ်ယောက်ယောက် ကြားဝင်ဖြေထားပေးကြပါ
-မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေတတ်လာတာနဲ့အမျှ..တယောက်ထဲနေရတာ အကြိုက်ဆုံး(အိပ်ချင်မှအိပ် စားချင်မှစား သွားချင်ရာသွား )
-တစ်ခုဘဲ…ငယ်ငယ်တုန်းက ကမ္ဘာပျက်သွားပြီးတဲ့နောက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာမျိုးတွေးမိတိုင်း
-အခုနောက်ပိုင်း အိုက်လို အတွေးမျိုး လုံးဝ မတွေးဖြစ်တော့တာ ကြာဘီ
-နင် အကြောက်လွန်ပီး သေသွားရင်တောင် ဟိုက ဆက်တက်အုန်းမှာ :harr:
-သာမီး ယောက်ကျားယူ ခလေးမွေးပီးရင် တခေါက်ပြန်လာဖြေမယ်
အဲဒါ အမှန်တကာ့ အမှန်ဆုံးဘဲ။